‘पुष्पाः द राइज’का निर्देशकले गरेका पाँच ठूला गल्ती - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
साउथ स्टार अल्लु अर्जुनको फिल्म ‘पुष्पाः द राइज’ले बक्सअफिसमा अहिले पनि राम्रो व्यापार गरिरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण भारतका कैयौं राज्यमा थिएटर बन्द गरिए पनि केही राज्यमा ५० प्रतिशत क्षमताका साथ खोल्न अनुमति दिइएको छ । यसको बाबजुद पनि फिल्मको बक्सअफिस कलेक्सन उत्कृष्ट छ ।
फिल्ममा अल्लु अर्जुनको संवाद बोल्ने शैली र द्वन्द्व दृश्यलाई दर्शकले निकै मनपराएका छन् । सबै कुरा राम्रा हुँदा हुँदै पनि यो फिल्मका पाँच गल्तीमा कसैले ध्यान दिएको छैन ।
‘पुष्पा’ पछि फ्यानलाई पागल बनाउन सामन्था तयार, अब यो फिल्ममा आइटम डान्स गर्ने
पहिलो गल्ती, फिल्ममा पुष्पाका साथी केशव शुरुमा भेनको ढोका खोल्न जान्दैनन् । अर्को दृश्यमा उनै साथीलाई नयाँ मारुती कार चलाउँदै गरेको देखाइन्छ । जो मानिसलाई ढोका नै खोल्न आउँदैन, त्यो मानिस कसरी भेन चलाउन पुग्छ भन्ने गल्ती निर्देशक सुकुमारले देखाएका छन् ।
. एक्सन अवतारमा आउँदै सामन्था
. आजवाट सिनेमा हल खुल्ला हुने, पुष्पा र चपलीहाइट प्रदर्शनमा
. सारीमा झनै सुन्दर देखिन्छिन् सामन्था, हेरौं‌ तस्विरहरू
. सामन्थाको सम्वन्धविच्छेद हुनुमा राम चरणसँगको किस सिन पनि एक कारण
. ‘पुष्पा’ फिल्मको हिन्दी संस्करणले कमायो १०० करोड
दोस्रो गल्ती, फिल्मको त्यो दृश्यलाई सम्झनुहोस्, जहाँ पुष्पाले प्रहरीबाट बच्नका लागि ट्रक उडाएर एक खाल्डोमा झार्छन् । पुष्पा जुन खाल्डोमा ट्रक झार्छन्, त्यो खाल्डो सडकको किनारामै हुन्छ । त्यसो भए के पुलिसले सडक किनारमा भएको यति ठूलो खाल्डो देखेन ? प्रहरीले खाल्डो नदेखेपनि कच्ची सडकमा ट्रकको टायरको निशाना त प्रहरीले देख्न सक्थ्यो नि । तर पुष्पालाई पक्रने प्रहरीको दिमाग सानो भएकाले पनि यी सारा कुरा खोज्न उसले मेहनत गरेन ।
तेस्रो गल्ती, जब पुष्पा श्रीनूको साला मोगलिसलाई पानीमा मार्छ, त्यहाँ उसले पानीमा मोटरसाइकल पनि घुमाउँछ । जबकी नदीमा ठूला–ठूला चट्टान हुन्छन्, अब सोच्नुहोस् कि चट्टानको बीच पानीमा बाइकलाई घुमाउने विज्ञानको कुन नियमले सही भन्छ ?
चौथो गल्ती, फिल्ममा सबैभन्दा ठूलो गल्ती त्यो दृश्यमा छ, जहाँ पुष्पा रक्तचन्दनको लकडीलाई पानीमा फ्याक्छन् । यसैमा पुरा कथा आधारित छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रक्तचन्दनको मूल्य करोडौं छ । भारतको रक्त चन्दनको सर्वाधिक माग गर्ने चीन हो । रक्तचन्दनको यस्तो काठ हो, जसको सानो भन्दा सानो भाग पनि पानीमा डुब्छ । तर फिल्ममा भने काठ पानीमा तैरिएको देखाइएको छ ।
पाँचौं गल्ती, फिल्मको एक दृश्यमा पुष्पा ट्रकको बोनटमा बसेर घुमिरहेको देख्न सकिन्छ । दृश्यमा ट्रक घुमिरहेको छ, तर ट्रकको भित्र कुनै चालक हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा ट्रक कसरी घुम्छ ?
अमर उजाला मा प्रकाशित भएको यो सामाग्रीलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको हो ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बिहीबार, माघ २७ २०७८ १५:३२:३२
#पुष्पासामन्था रुथ प्रभु
शाहरुख पुत्र आर्यन खानले पाए ‘क्लिन चिट’